Njehie bụ ndị iro SEO gị | Martech Zone
Njehie bụ SEO iro gị
Monday, August 6, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu n’ime atụmatụ izizi anyị na ndị ahịa na-awakpo mgbe a bịara n’ihe njikarịcha nchọta ihe bụ njehie na Google Search Console. Ọ bụ ezie na enweghị m ike ịkọwapụta mmetụta nke njehie Enwere m ike ịgwa gị na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ndị ahịa anyị nwere nsogbu kachasị dị ntakịrị na Webmasters nwere ọkwa SEO kachasị na mmetụta organic.
Ọ bụrụ na iji Google Search Console eme ihe mgbe niile, ị kwesịrị ịdị. Na ụfọdụ ndị ahịa, anyị na-etinye uche na webmasters karịa ka anyị na-eme na Analytics n'onwe ya!
rụọ ọrụ pịa-site udu, na-emeziwanye ogo na ibe peeji bụ ihe dị mgbagwoju anya, ma njehie dị mfe karị. Njehie eziga ozi na Google na saịtị gị enweghị ntụkwasị obi. Google achọghị iziga ndị ọrụ ya peeji ndị na-ahụghị ma ọ bụ saịtị na-abụghị mgbe niile isi iyi nke ngwa ngwa, mkpa, na-adịbeghị anya na Ugboro ozi.
Ijikwa redirects iji wepu ndi na-achoputa site na peeji nke na adighi adi na peeji nke na adighi adi nma maka njikarịcha njin ọchụchọ gi, o dikwa oke nkpa inye ndi nleta ezigbo akwukwo. Ha nwere ike ịpị njikọ ochie na saịtị dị na mpụga, ma ọ bụ na ha nwere ike ịpị nsonaazụ ọchụchọ… n'ụzọ ọ bụla, ha na-achọ ihe na saịtị gị. Ọ bụrụ na ha achọtaghị ya, ha nwere ike ịhapụ ma gaa na njikọ ọzọ, nke nwere ike ịbụ onye na-asọ mpi gị.
Ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, ụzọ dị mfe iji mee nke a bụ ịgbakwunye ọtụtụ redirects n'ime ndebiri peeji 404 gị!
Ihe dị mkpa: Ngwaọrụ iji mejupụta afọ ojuju
Ihe Mere Ndị Mmadụ Ji Ahapụ Carzụ ahịa